Sawirada Chernobyl iyada oo loo marayo muraayadaha infrared | Abuurista khadka tooska ah
Chernobyl, marka laga reebo Fukushima 2001dii Japan, waa mid ka mid ah masiibooyinkii ugu waaweynaa ee nukliyeerka casriga. Shilkii nukliyeerka wuxuu dhacay Abriil 26, 1986 wuxuuna hayey Yurub iyo adduunkoo dhan. Daqiiqad taariikhi ah oo tamarta nukliyeerka ay bilaabatay in lagu sheego cawaaqib xumada tamarta nadiifka ah marka hore.
Markan waxa uu ahaa sawir qaade Ruush ah oo lagu magacaabo Vladimir Migutin oo ayaa ku dhiiraday aagga Ka-reebitaanka Chernobyl leh kamarad infrared ah. Kaamiro infrared ah oo ku guuleysatay inay soo qaaddo sawirro qurux badan oo muujinaya saameynta aagga iyo sida dabeecadda u jabtay si looga dhigo dhawaaqa musiibada in la waayo waqtigeeda.
Migutin ayaa isticmaalay kamarad dhammaystiran oo buuxa iyo shaandho infrared 590nm ah in la diiwaangeliyo jawi sidii wax isdaba joog ah maadaama ay tahay raali ahaansho. Sida uu sheeganayo, waxaa loo qaaday adduun kale oo waqtiga la qaboojiyey si ay dabeecadda u raacdo si ay ugu beddesho.
Awooday ku sawir aagga shaandhadaas infrared-ka ah si loo soo jiito aragtiyo aad u soo jiidan kara Chernobyl. Sawir qaadahaan ayaa sawir gacmeed waxa uu ku muujinayaa iftiin aadanuhu arki karin.
Booqasho meel aan faaiido lahayn oo ay ku jirto ruuxi hore ee wixii Chernobyl ahaa iyo masiibadaas nukliyeerka ee adduunka oo dhan ogeysiisay. In kasta oo ay tahay in la sheego in aysan u muuqan in ay saameyn badan nagu yeelatay in aan la kulano 2011 oo ka dhan ah Fukushima ee Japan.
Waxaad kala socon kartaa Migutin boggaagauu Instagram iyo iyada blog waayo, ka hel sawirro dheeraad ah booqashadaas taasi oo ka dhigtay deegaan lagu soo duulay masiibo weyn oo nukliyeer ah oo ka dhacday carrada yurub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » Sawirada soo jiidashada leh ee Chernobyl oo lagu qaaday kamarad infrared ah